UK oo saldhig ciidan oo ka sameysatay Magaalada Baydhabo | Goojacade
Home Somalia UK oo saldhig ciidan oo ka sameysatay Magaalada Baydhabo
UK oo saldhig ciidan oo ka sameysatay Magaalada Baydhabo
Dowladda UK ayaa shalay xarigga ka jartay saldhig lagu tababarayo Ciidamada dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada.
Safaaradda UK ee Muqdisho ayaa shaacisay in shalay oo Sabti ahayd Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay laga furay Saldhig Ciidanka dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya lagu tababaro.
Safaaradda Dowladda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa sheegtay in ujeedada saldhiggaasi yahay sidii dowladda Federaalka ah looga caawin lahaa in amniga dalka ay kala wareegto AMISOM islamarkaana Ciidamadii ay kula wareegi lahayd qeyb ka mid ah lagu tababaro saldhigga.
Waxa uu noqonayaa Saldhiggii 4-aad ee dalalka shisheeye ay ka dhistaan wadankii Soomaaliya la odhan jiray, waxaana Saldhiggii u horeeyay uu Mareykanka ka sameystay deegaanka Bali-Doogle ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaa ku xigay midka Turkiga ee ku yaala deegaanka Jazeera ee duleedka Muqdisho iyo kan Imaaraatka Carabta uu ka sameystay Somaliland oo gooni uga goaday Somaliya.
Previous articleItoobiya: Deegaanka Soomaalida oo kala badh iyo dheeraad ka helaya khayraadka dabiiciga ah ee dalka
Next articleXildhibaan Ilhaan Cumar oo la ganaaxay